Bolsonaro, enyi Brazil !! ? – JucelinoLuz
Okwu onye ịhụ mba n’anya:
nke gbasara nnwere onwe na ọdịmma nke mba ahụ; ịhụ mba n’anya; onye na -akwado ịhụ mba n’anya, nke nkuzi ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na -eme mba ahụ uru zuru oke.
Onye iro nke rụrụ arụ na nke mkpagbu ọchịchị aka ike nke kụnyere na Brazil
Jair Bolsonaro ga -aga n’ihu na -awakpo ụlọ ọrụ ahụ, n’ihi na ọ bụ n’aka ha ka amụrụ ndị ọchịchị aka ike na ndị rụrụ arụ na Brazil. Ọ bụ akụkụ nke ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị gị. Ọ na -ejikọ ya na usoro ọchịchị onye kwuo uche ya wee hụ nrigbu megide ndị mmadụ, nke ndị na -erite uru na ndị rụrụ arụ na -ejigide ọdịnala (iwere) ebe a, na -akwado ihu ọma na iri ego site n’akpa ọha ruo ihe karịrị afọ 50 site n’aka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịbịaru ndị mmadụ nso, naanị iji mee ihe… Ọ bụghịkwa ihe ọhụrụ na -echebe ndị Brazil. O mere otu a ruo afọ iri atọ nke ndụ ndị omeiwu. Iwu ndị ahụ nyere aka na -akwado nnwere onwe onye kwuo uche ya na ụkpụrụ iwu na -enweghị nzaghachi zuru oke, gụnyere na ngalaba iwu. O mere ihe dị ka ezigbo mmadụ. Maka nke a, ndị rụrụ arụ na ndị iro ha na -emeso ya dị ka onye ara, nwa amaala nọ nso – bụ na ndị rụrụ arụ niile nọ na Brazil chọrọ, n’echiche nke ndị na -eduhie ndị mmadụ, ka ha bụrụ ndị na -enweghị ọrụ na nke ahụ agaghịkwa eru eru. ụdị nzaghachi ọ bụla ndị Democrats na, obere, ndị ọka ikpe. Nke ahụ bụ, ndị na -akwado ndụ nlekọta, na -atọhapụ ndị ohi, ndị ohi, nchekwa, ahụike, na agụmakwụkwọ efu, yana oke ihere nke ndị mmadụ – na ọ naghị ahapụ ego ma ọ bụ gbanwere ihu ọma n’aka gọọmentị etiti, yabụ ndị a chere na ha bụ ndị omekome. na -eme ihe dị ka anụmanụ ma na -echepụta ihe niile iji wepụ ezigbo nwa amaala a site na Onye isi ala. A na -enyo enyo na otu a na gọọmentị na -azụ ahịa na mba ofesi – na azụmahịa nzuzo na nzukọ, ya bụ, mpụ nke nraranye n’ala nna, yana itinyekwa edemede 142 n’ọrụ.
Oge gafere na diatribes nke ndị a rụrụ arụ ruru oke ha, ha chọrọ ịtụgharị ndị na -achị ọchị ka ọ bụrụ njakịrị, ” mkparị ”, ọ bụ ya mere ha ga -eji jikọọ nde nde ndị ịhụ mba n’anya n’ọchịchị onye kwuo uche ya na n’udo, gaa ngagharị na ngagharị iwe na Brasília, na n’ihu obí eze a sị na ọ bụ ndị ihe na -adịghị emetụ n’ahụ na ndị rụrụ arụ mebere, na -ekweghị ka ha banye ebe ahụ – n’ihi na ike ha dị n’aka ndị Brazil, ndị na -eji iwu, ime mpụ, imebi na imebi emume nke Iwu Iwu Brazil. , n’ihi na n’ime ngosipụta gara aga nke emegharịrị ka ọ bụrụ na ha kwesịrị ka enwe ekele maka ọdịnaya ha, mana – na n’oge ahụ bụ otu n’ime mmejọ – enweghị mmerụ ahụ n’ihi na ha na -aga n’ihu na -akwa ndị Brazil emo – dịka ha mere n’oge gara aga – ịmara na enwere mmetụta dị n’etiti ha na ha agaghị ekpe ibe ha ikpe, ma ọ bụ wepụ ndị na -etinye aka na nrụrụ aka na ndị omekome n’ọchịchị – ndị Brazil chọrọ ọnụ, nye otu, nke ahụ ezuola! Ndị mmadụ ga -achọta ụzọ iwu kwadoro iji wepụ ọchịchị aka ike ebe ahụ, ịdị nso dabere na nkwekọrịta nkịtị. Ike ọgwụgwụ a nke igbochi ndị nnupụisi a, mgbochi ọchịchị onye kwuo uche ya, na ịgbachitere okwu mmebi iwu mmadụ (ihe nwere naanị nsọpụrụ na Brazil maka ndị na-eme mpụ). Ụda olu maka ọchịchị aka ike nke kọntinent ahụ bụkwa akụkụ nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke CPI na ndị na -akwado ya, STF, nke nọ na -emebi iwu ma na -eso ma na -etinye echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mkpebi ya. O mepụtara agwa nke ndị ikpe na -adịghị ahụ anya nke tolitere na ọdịda ọ bụla nke ndị pere mpe nke ụlọ ọrụ na -agbachitere omume ọma, nchekwa ọha na nke iwu yana ọganihu akụ na ụba.
Ụda olu maka ọchịchị aka ike nke kọntinent ahụ bụkwa akụkụ nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị mmụọ ọjọọ nke ndị otu jikọtara na mpụ a haziri ahazi na Brazil.
Ịdị ukeara ofara nke ndị ọchịchị aka ike dị otú ahụ na elepụghị anya n’ihu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị isi obodo ahụ kwere ka akụkụ arụrụ arụ ndị a na mpụ a haziri ahazi jiri nwayọọ nwayọọ bụrụ ntụpọ maka ndị nwere nkụda mmụọ na “ndọrọ ndọrọ ọchịchị ochie.” Na -enweghị mkparịta ụka anụ ahụ nke ga -enye ya ohere igosipụta echiche ụwa ihere, ọ nọrọ na ntụpọ site na mwakpo usoro, itinye ụlọ mkpọrọ, iwepụ ọdịnaya site na ‘ịntanetị’ na akwụkwọ nta sitere n’usoro iwu. N’iji ohere nwa oge – nke agaghị enwe ike ịmegharị ọzọ – nke iyi ụlọ ọrụ, dị ka mwepụta nke ọtụtụ ndị rụrụ arụ na ndị omempụ, nzukọ zoro ezo na onye nnọchi anya gọọmentị, ndị gọvanọ wee mepee ohere igosipụta iwu na iwu ọchịchị aka ike jikọtara n’etiti ike ụfọdụ, nke ahụ bụ , Covidão – na mgbe e mesịrị, asịrị ga -ebilite, na onye na -enweghịdị mmasị na CPI a, n’ihi na, n’ọdịnihu, mpụ ndị a na -eme ugbu a ga -agwụ n’oge na -adịghị anya, dịka o mere n’ọtụtụ ndị ọzọ, dịka Mensalão, Petrolão, Lava Jato, ọtụtụ ndị ọzọ, nke a karịa ka ọ dị na mbụ, ndị ọgbọ ya na Chamber ji ya kpọrọ ihe – naanị cheta na enwere ọtụtụ ọnọdụ, ọ nweghị onye chọrọ icheta ma ọ bụ kpee ndị omekome ahụ ikpe, ma ọ bụrụ na mwepụ nke ndị minista STF, onye isi oche nke ụlọ. . Ihe niile na -emegide uche ndị Brazil.
Ọrụ dị ugbu a bụ izere ịtụle, ọzọ, omume Bolsonaro dị ka ihe efu. Ndị omekome a adịghị mfe. Nrụrụ aka na -egbu ihe ka ukwuu, mmebi dị n’akpa ego ọha, ndị nnọchi anya ike ụfọdụ na Brazil, na -anọchite anya ihe iyi egwu kasịnụ maka ọchịchị onye kwuo uche ya na mmepe ziri ezi maka mmadụ niile na Brazil.
Ha na -atụba aha Brazil na apịtị na mba ofesi, ha na -anwa ịchịkwa gị site n’egwu, ha na -achọ ịnọgide na -ezu ohi gị, dịka ọtụtụ ndị na -ezu ohi taa, akụkụ nke Ikpe Ziri Ezi na -eji iwu na Iwu, na omume nke ikpe na -ezighị ezi , ha na -ezuru ihe n’aka ndị ogbenye na ndị na -akwụwa aka ọtọ, na -emebi ahụike, agụmakwụkwọ na nchekwa ọha. Ha chọrọ ka ị bụrụ onye na -enweghị ọrụ na enweghị olileanya. Akụkụ nke nnukwu Sensational Media na -enweta nde mmadụ iduhie gị.
Gị onye na -eme ntuli aka na -ezighi ezi, ma ọ bụ site na ịgbanwere ihu ọma, site na ọkọlọtọ otu, cheta nke a, ọ bụ naanị gị kpatara mbibi Brazil!
Ọ bụ oge aka gị, nke njikọ gị, ka ị nwee ike wepu ọchịchị aka ike, ndị omekome na ndị rụrụ arụ na Brazil.
Prọfesọ Jucelino Nobrega da Luz – onye nyocha, onye mmetụta na onye ndu mmụọ